UON ကို တကယ်သွားမပြောဘဲ UON ကိုသွားပြောဖို့ နည်းလမ်း 10 ခု - ဘဝ
UoN ကို တကယ်သွားမပြောဘဲ UoN ကိုသွားပြောဖို့ နည်းလမ်း 10 ခု
နောက်ဆုံးတော့ သင်ဟာ တက္ကသိုလ်တက်နေပြီ၊ သင်ကိုယ်တိုင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သင်ရှာတွေ့ရန်သာလျှင်အလှည့်တိုင်းတွင် North Faces puffers၊ မီးတောက်များနှင့် ယောက်ျားလေးများ။ သင့်အားကစားအဖွဲ့ကို သင်၏ PlayerLayer တွင် လှည့်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးရှိခြင်းထက် လူအစုအဝေးမှ ပေါ်ထွက်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။
Surrey နှင့် London ၏ 90% နီးပါးနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် အမှန်တကယ်ပင် အလယ်အလတ်တန်းစားတစ်ဦးအဖြစ် သင့်ကိုယ်သင် သေချာပေါက်မြင်ရပြီး Nottingham ထက် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် ပိုကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ကိုအသစ်နဲ့ မင်းအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ မင်းရထားလမ်းပျောက်ပြီး မြို့ထဲမှာ သက်သာရာရတယ်ဆိုပြီး ကြွားလုံးထုတ်နေလိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာ UoN တွင် အလွန်အမင်း ကြီးကြီးမားမားရှိသော အရာများ စုစည်းထားသော စာရင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကို လုပ်ပါက သင်ပြောစရာမလိုဘဲ uni သို့ လူများ ချက်ခြင်း သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် Lenton Triangle တွင်နေထိုင်သည်။
သင်ပြီးပြီ။ သင်၏ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်အိမ်တို့ကို စီစဥ်ထားပြီး Lenton တြိဂံကိုယ်တိုင်ထက် နေထိုင်ရန် ပိုကောင်းသည်။
တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကို အော်ပြောတဲ့အခါ
နိုင်ငံ၏စျေးအကြီးဆုံး Sainsbury ၏အိမ်နှင့်ထောင့်ဆိုင်များအားလုံး၏နေရာဖြစ်သည့် Booze Busters သို့ခဏသာလမ်းလျှောက်ပါ။ ထို့အပြင် UoN ကျောင်းသားများနှင့် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသည့် အပိုဆုကြေးများသည် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘယ်သောအခါမှ မဝေးတော့ဟု ဆိုလိုသည်။
Hallward vs George Green သည် သင်ပြုလုပ်ဖူးသမျှ အခက်ခဲဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
စကားရည်လုပွဲ၏ အကြီးမားဆုံး အတွင်းစည်း Uni သည် Hallward သို့မဟုတ် George Green ကို ပိုနှစ်သက်ပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် STEM ကျောင်းသားမဟုတ်ပါက၊ George Green သို့သွားခြင်းသည် သင့်အတွက် ဇယားမပါသော နယ်မြေဖြစ်သည်။
ဂဏန်းပေါင်းစက်များနှင့် သံလိုက်အိမ်မြှောင်များတွင် နစ်မြုပ်နေပါက Tort Law သို့မဟုတ် အလယ်ခေတ်ကဗျာစာအုပ်များတွင် အဆင်မပြေပါ။ အဆိုးဆုံးက ပိုဆိုးတာက Monica Partridge က မင်း BA နဲ့ BSc Geographers အားလုံးအတွက် အမြဲတမ်း အလယ်အလတ်ကောင်းတစ်ခုပါ။
34 ကို မေ့လိုက်ပါ၊ မင်းက Wind Scooter ကို နေရာတိုင်း ယူသွားပါ။
UoN ကို ဂုဏ်ပြုရန် အကြီးမားဆုံးနှင့် အသစ်သောလမ်းကြောင်း၊ စကူတာများ။ ပေါင်မုန့်လှီးပြီးကတည်းက အကောင်းဆုံးအရာဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤစကူတာများသည် သင့်အား Aမှ B သို့ ခေါ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း လိုက်နေသည့် ငန်းတစ်ကောင်မှ လွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော် သူတို့သည် ရေကန်ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် သွားလာရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်၊ ကုန်းတက်ကားစီးရသည်မှာ ပျော်စရာကောင်းမည်ဟု မထင်ပါ။
သင်သည် Spar သို့ အပတ်စဉ် အစားအသောက်ကတ်ခရီးစဉ်များ ပြုလုပ်သည်။
ဧည့်ခံခန်းမများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများစွာထဲမှ တစ်ခု- အစားအသောက်ကတ်။ ရက်သတ္တပတ်အဆုံးတွင် သင်သည် သင်၏စားသောက်ကတ်တွင် ပိုက်ဆံများစွာကို မည်သို့သိမ်းဆည်းထားသနည်း၊ ထို့ကြောင့် Spar သို့ခရီးထွက်ခြင်းထက် အဘယ်အရာက ပိုကောင်းသနည်း။
မဟုတ်ရင် စောစောသွားပါ အစားအသောက်ရွေးချယ်မှု ညံ့ဖျင်းပြီး တစ်ပတ်တာလုံး သင့်အတွက် ချောချောမွေ့မွေ့မရှိတာ သေချာပါစေ။ သို့သော်၊ အရသာအရှိဆုံး အစားအစာအားလုံးကို မီးဖိုတွင် ချက်ပြုတ်ရန် လိုအပ်ပြီး သင့်အိမ်ခန်းငယ်တွင် တစ်လုံးမှ မရှိသည်ကို သိမြင်ခြင်းထက် ပိုဆိုးသည်မှာ မရှိပါ။
အရက်သောက်ဂိမ်း။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွေ့တိုင်း သေနတ်နဲ့ ပစ်ပါ။ အမှန်အတိုင်းဆိုကြပါစို့၊ သင်သိတဲ့လူတိုင်းက 'လန်ဒန်အပြင်မှာသာ' လို့ပြောရင်တောင် Surrey၊ Kent ဒါမှမဟုတ် London ကပါ။
Instagram မှာသူတို့ကို follow လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။ North မှ စတင်သည့်နေရာတွင် တိကျသောစိတ်ကူးရှိသူနှင့် Watford ကိုရည်ညွှန်းရုံသာမဟုတ်ပဲ ဘောနပ်စ်အမှတ်များ။
သင်သည် North Face puffer နှင့် မီးတောက်များကို သီးသန့်ဝတ်ဆင်ထားသည်။
North Face puffer ? စစ်ဆေးပါ။ မီးတောက်များလား? စစ်ဆေးပါ။ PlayerLayer ထဲထည့်လိုက်ပြီး UoN စတိုင်ကို ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ။
ကျောင်းသားအားလုံး ဒီလိုဝတ်ထားလို့ မင်းသူငယ်ချင်း ဆုံးရှုံးသွားရင် ကံကောင်းမယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Cow vintage ဒါမှမဟုတ် Depop လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတာမို့ အဝေးက သဘောကျဖို့ သေချာပါတယ်။
မင်းက Wollaton မှာ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ခဲ့တာ
ကျောင်းဝင်းဘေးမှာ တည်ရှိပြီး Wollaton Park ထက် လမ်းလျှောက်ဖို့ ပိုကောင်းတဲ့ နေရာပါ။ Tinder ရက်စွဲအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်
Batman မှ Wayne Manor တွင် ပျော်ပွဲစားထွက်ရင်း သင်နှင့် သင့်သူငယ်ချင်းများ၏ Snapchat ဇာတ်လမ်းများကို ပြသရန် အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ခန်းမက သာလွန်တယ်လို့ မင်းယုံတယ်။
uni သို့မ၀င်မီ ခန်းမများကို အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့်၊ Hall superiority သည် ယခင်ကထက် ပိုမိုကြီးမားပါသည်။
သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စရိုက်လက္ခဏာ တစ်ခုလုံးသည် ဤအရာနှင့် ပတ်သက်နေပြီး သင်အမြဲတမ်း ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ မင်းရင်ထဲမှာ စတိုင်ကျတဲ့ Hugh-Stewart ကို ထွေးပွေ့ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းမှာရှိတဲ့ မိုက်မဲတဲ့ Beeston ခန်းမကို ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Rutland မှာ မရှိတာကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
မင်းရဲ့နေ့လည်စာကို Portland ကနေ နေ့တိုင်းရတယ်။
အတက်အဆင်းတွေကို ရုန်းကန်ပြီးရင် အစားအသောက်ခုံရုံးကို ခြေလှမ်းများများတက်တာထက် မင်းရဲ့ဆာလောင်မှုကို ပြေပျောက်အောင် ဆင်နွှဲဖို့ ဘယ်နည်းလမ်းက ပိုကောင်းလဲ။ စားရခက်တဲ့အပိုင်း ရောက်လာတယ်။ ဂန္ထဝင် Love Joes သို့မဟုတ် ပီဇာနေရာကို သင်သွားပါသလား။
အဲဒါက မင်းအတွက်မဟုတ်တော့ဘဲ နာမည်ကြီး Portland ကော်ဖီဆိုင်က မုန့်ဟင်းခါးကို စောင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် အလွယ်တကူနှစ်သက်သူများသည် နှိမ့်ချသော Spar စားသောက်မှုသဘောတူညီချက်အတွက် အခြေချနေထိုင်ရန် ပျော်ရွှင်ကြသည်။
သင့်တွင် Trent အတွက် မရှင်းပြနိုင်သော အမုန်းတရားတစ်ခုရှိသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင်သွားသော Notts တွင် မည်သည့်တက္ကသိုလ်ကို UoN နှင့် Trent မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားသည့်အခါတိုင်း သင်သည် ပထမနှစ် ကျောင်းသားဖြစ်နိုင်သည်။
Freshers ထက်ဝက်သည် Trent ကိုမုန်းတီးခြင်းသည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုအတွက် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ပုံရသော်လည်း သင်ခန်းမများအပြင်မှ သင်၏လူမှုကွန်ရက်ကိုချဲ့ထွင်လိုက်သည်နှင့် Trent ကျောင်းသားများသည် တစ်ဝက်တစ်ပျက်မဟုတ်ကြောင်း သိလာရသည်။
အဲဒီမှာ မင်းရဲ့ uni အဆင့်အတန်းကို ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ တိကျတဲ့စာရင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ပါ။
ဤစာရေးဆရာမှ အကြံပြုထားသော ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများ
• Notts အနီးတဝိုက် လမ်းလျှောက်ရင် မင်းအကြိုက်ဆုံးက ဘာပြောတာလဲ။
• Lenton ရှိ မင်းလမ်းက မင်းအကြောင်း ဘာပြောလဲ။
• UoN ကျောင်းဝင်းတွင် လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနေရာများ၏ တိကျသေချာသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်